Ukuqinisekisa Kanjani Ukuqinisekiswa Kwe-imeyili Yakho Kusethwe Ngokufanelekile (DKIM, DMARC, SPF) | Martech Zone
Ukuqinisekisa Kanjani Ukuqinisekiswa Kwe-imeyili Yakho Kusethwe Ngokufanelekile (DKIM, DMARC, SPF)
NgoLwesibili, Januwari 25, 2022 NgoLwesithathu, Januwari 26, 2022 Douglas Karr
Uma uthumela i-imeyili nganoma yiluphi uhlobo lwevolumu, imboni lapho uthathwa njengecala futhi kufanele ubonise ukuthi umsulwa. Sisebenza nezinkampani eziningi ezizisiza ngokufuduka kwama-imeyili, ukufudumala kwe-IP, nezinkinga zokulethwa. Izinkampani eziningi aziboni nakancane ukuthi zinenkinga.
Izinkinga Ezingabonakali Zokudiliva
Kunezinkinga ezintathu ezingabonakali ngokuthunyelwa kwe-imeyili amabhizinisi angazazi:
Imvume - Abahlinzeki besevisi ye-imeyili (ESP) phatha izimvume zokungena... kodwa umhlinzeki wesevisi ye-inthanethi (I-ISP) iphethe isango lekheli le-imeyili okuyiwa kulo. Kuyisistimu embi ngempela. Ungenza yonke into ngendlela efanele njengebhizinisi ukuze uthole imvume namakheli e-imeyili, futhi i-ISP ayinawo umqondo futhi ingase ikuvimbele noma kunjalo.
Ukubekwa Kwebhokisi Lemilayezo Engenayo - Ama-ESP akhuthaza kakhulu ukuhanjiswa amanani angenangqondo. I-imeyili eqondiswe ngqo kufolda ye-junk futhi engakaze ibonwe obhalisele i-imeyili yakho ilethwa ngokobuchwepheshe. Ukuze uqaphe ngokweqiniso yakho ukubekwa kwebhokisi lokungenayo, kufanele usebenzise uhlu lwembewu bese uyobheka i-ISP ngayinye. Kukhona izinkonzo ezenza lokhu.
Idumela - Ama-ISP kanye nezinsizakalo zezinkampani zangaphandle nazo zigcina izikolo ezidumile zokuthumela ikheli le-IP le-imeyili yakho. Kukhona izinhlu zokuvinjelwa ezingase zisetshenziswe ama-ISPs ukuvimba wonke ama-imeyili akho, noma ungase ube negama elibi elingakwenza udluliselwe kufolda kadoti. Kunenombolo yezinsizakalo ongazisebenzisa ukuze ugade isithunzi sakho se-IP... kodwa ngingaba nokuphelelwa ithemba njengoba abaningi bengenakho ukuqonda ngama-algorithms e-ISPs ngamunye.
Imikhuba engcono kakhulu yokunciphisa noma yiziphi izinkinga zokubekwa kwebhokisi lokungenayo iwukuqinisekisa ukuthi usethe inani lamarekhodi e-DNS ama-ISPs angawasebenzisa ukuze abheke futhi aqinisekise ukuthi ama-imeyili owathumelayo athunyelwa nguwe ngempela hhayi othile ozenza inkampani yakho. . Lokhu kwenziwa ngenani lamazinga:
Uhlaka lwenqubomgomo yabentwana (SPF) - izinga elidala kunazo zonke, kulapho ubhalisa khona irekhodi le-TXT ekubhaliseni kwesizinda sakho (DNS) okusho ukuthi yiziphi izizinda noma amakheli e-IP othumela kuwo i-imeyili yenkampani yakho. Isibonelo, ngithumela i-imeyili yokuthi Martech Zone kusukela Indawo Yokusebenzela yakwaGoogle futhi kusuka I-CircuPress (eyami i-ESP njengamanje iku-beta). Ngine-plugin ye-SMTP kuwebhusayithi yami engizophinde ngiyithumele nge-Google, ngaphandle kwalokho ngizoba nekheli le-IP elifakwe nalokhu.
DomainUkuqinisekiswa Komlayezo okusekelwe, Ukubika kanye Nokuhambisana (I-DMARC) - leli zinga elisha linokhiye obethelwe kuwo ongaqinisekisa kokubili isizinda sami kanye nomthumeli. Ukhiye ngamunye ukhiqizwa umthumeli wami, eqinisekisa ukuthi ama-imeyili athunyelwe umuntu othumela ogaxekile awakwazi ukonakala. Uma usebenzisa i-Google Workspace, nakhu indlela yokusetha i-DMARC.
Imeyili Ekhonjiwe Ye-DomainKeys (I-DKIM) - Ngokusebenza ngokuhambisana nerekhodi le-DMARC, leli rekhodi lazisa ama-ISPs ukuthi ayiphathe kanjani imithetho yami ye-DMARC ne-SPF kanye nokuthi ithunyelwa kuphi imibiko yokulethwa. Ngifuna ama-ISP enqabe noma imiphi imilayezo engadluli i-DKIM noma i-SPF, futhi ngifuna ukuthi athumele imibiko kulelo kheli le-imeyili.
Izinkomba Zomkhiqizo Zokuhlonza Umlayezo (I-BIMI) - okungeziwe okusha, i-BIMI ihlinzeka ngendlela yokuthi ama-ISP nezicelo zawo ze-imeyili abonise ilogo yomkhiqizo ngaphakathi kweklayenti le-imeyili. Kukhona kokubili izinga elivulekile kanye ne indinganiso ebethelwe ye-Gmail lapho futhi udinga khona isitifiketi esibethelwe. Izitifiketi zibiza kakhulu ngakho-ke angikwenzi lokho okwamanje.
QAPHELA: Uma udinga usizo lokusetha noma iyiphi i-imeyili yakho yokuqinisekisa, ungangabazi ukuxhumana nenkampani yami. Highbridge. Sineqembu ochwepheshe bokuthengisa nge-imeyili kanye nokulethwa lokho kungasiza.
Ungakuqinisekisa Kanjani Ukuqinisekiswa Kwe-imeyili Yakho
Lonke ulwazi lomthombo, ulwazi lokudlulisa, kanye nolwazi lokuqinisekisa oluhlotshaniswa nawo wonke ama-imeyili lutholakala ngaphakathi kwezihloko zemiyalezo. Uma uchwepheshe wokulethwa, ukuhumusha lokhu kulula kakhulu… kodwa uma ungumfundi, kunzima ngendlela emangalisayo. Nakhu ukuthi unhlokweni womlayezo ubukeka kanjani ephephandabeni lethu, ngifiphaze amanye ama-imeyili wokuphendula kanye nolwazi lomkhankaso:
Uma ufunda konke, ungabona ukuthi iyini imithetho yami ye-DKIM, noma ngabe i-DMARC iyaphasa (ayiphasi) nokuthi i-SPF iyadlula… kodwa umsebenzi omningi lowo. Kukhona isixazululo esingcono kakhulu, noma kunjalo, futhi okufanele sisetshenziswe DKIMValidator. I-DKIMValidator ikunikeza ikheli le-imeyili ongalingeza ohlwini lwakho lwezindaba noma ulithumele nge-imeyili yehhovisi lakho…
Okokuqala, iqinisekisa ukubethela kwami ​​​​kwe-DMARC kanye nesiginesha ye-DKIM ukuze ubone ukuthi iyadlula noma ayidluli (ayiphumeleli).
Bese, ibheka irekhodi lami le-SPF ukubona ukuthi liyadlula (liyaphumelela):
Okokugcina, inginikeza ukuqonda ngomlayezo ngokwawo kanye nokuthi okuqukethwe kungase kuhlabe umkhosi yini kwamanye amathuluzi okuthola ugaxekile, ihlole ukuze ibone ukuthi ngisohlwini lwabavinjelwe, futhi ingitshele ukuthi kuyanconywa yini noma cha ukuthi ithunyelwe kufolda kadoti:
Qiniseka ukuthi uhlola yonke i-ESP noma isevisi yemiyalezo yenkampani yangaphandle inkampani yakho ethumela kuyo i-imeyili ukuze uqiniseke ukuthi Ukuqinisekiswa Kwe-imeyili yakho kumiswe ngendlela efanele!
Hlola I-imeyili Yakho Ngesiqinisekisi se-DKIM
Ukudalulwa: Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuxhumana se- Indawo Yokusebenzela yakwaGoogle kulesi sihloko.
Tags: Izinkomba Zomkhiqizo Zokuhlonza Umlayezoukuhanjiswadkimisignesha ye-dkimdkim isiqinisekisiI-DMARCdnsUkufakazela ubuqiniso bemilayezo esuselwa esizindeniImeyili Ekhonjiwe Ye-DomainKeysukuqinisekiswa kwe-imeyiliindlela yokuhlola i-dkimindlela yokuhlola i-dmarcUkubika Nokuhambisanauhlaka lwenqubomgomo yomthumelii-spf
Indlela Ukulungiswa Kwebhizinisi Kwengeza Ngayo Inani Ezinqubweni Zakho Zokuthengisa
Landelela Chofoza ukuze Ushaye Izixhumanisi Ezehlakalweni Zezibalo Ze-Google Usebenzisa Isiphathi Somaka se-Google